PressReader - Isolezwe: 2018-11-08 - Bayakhala abebelwa eyezibonelelo
Bayakhala abebelwa eyezibonelelo
ZIYANDA izigameko zabantu abahola imali yesibonelelo abathole ukuthi isiholwe ngabanye selokhu kuqale uhlelo lwamakhadi amasha okuhola kwaSouth African Social Security Agency (Sassa).
Isolezwe lithintwe ngabafundi balo bekhala ngokuthi abayitholi imali yabo, bacele ukuthi amagama abo afihlwe ngoba besaba ukuthi bangase bahlukunyezwe uma sebeyocela usizo emahhovisi akwaSassa, ePinetown.
Iningi labantu abathinte Isolezwe basezindaweni ezakhele iPinetown, omunye wabo uthe kuthiwa imali ikhishwe wumuntu owenze ikhadi elisha eMgungundlovu.
“Bengingalenzile ikhadi elisha lokuhola ngoba bengithi ngizolenza uma kuphela u-Okthoba. Ngithe uma sengiyohola ngomhla ka-31 ngatshelwa ukuthi imali ayikho. AbakwaSassa ePinetown bathe angiye ePosini ukuze ngithole incanzelo. Ngithe uma ngifika ePosini ngatshelwa ukuthi imali yesibonelelo sezingane zami ikhishwe ngomunye umuntu owenze ikhadi elisha eMgungundlovu. Angikaze ngiwulahle umazisi futhi angazi ukuthi lowo muntu ulenze kanjani ikhadi elisha ngoba kugingqwa nezithupha,” kusho omunye.
Isolezwe lithumele imibuzo kwaSassa libuza ukuthi ngabe uhlelo lwabo lobuchwepheshe lusengcupheni yini njengoba abantu bebika ukuthi izibonelelo zabo ziholwa ngabanye.
UMnuz Mbizeni Mdlalose oyiPhini loMqondisi wezokuXhumana kwaSassa KwaZuluNatal, uthe ubuchwepheshe babo busezingeni eliphezulu futhi kusaqhubeka uphenyo ngezigameko zabantu abathole ukuthi izibonelelo zabo ziholwe ngabanye.
“Siyaziphenya izigameko zokuholwa kwezibonelelo ngabantu abangafanele, sisebenzisana nePosi kulolu phenyo ngoba nalo liyabaholela abantu izibonelelo. Sinezinhlelo zokulawula ukuholwa kwezibonelelo ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle kwaSassa nasePosini. Okwamanje kuzoba nzima ukuqagela ukuthi abantu abangafanele ukuhola izibonelelo zikahulumeni bayihola kanjani imali yabanye,” kusho uMdlalose.
Uthe uma abantu bethola ukuthi izibonelelo zabo ziholwe ngabanye abantu kufanele baphuthume emahhovisi akwaSassa aseduze nabo noma bashayele u-0800 60 10 11 no-033846 34 00.